Ezona nkqubo zilungileyo zokuhlela iividiyo: ziyintoni kwaye zisetyenziselwa ntoni | Abadali be-Intanethi
Umthombo: Macworld Spain
Ukuhlela indawo yentengiso eneziphumo ezizodwa ezingapheliyo, izihloko ezihambayo kunye nokuskrola kububanzi besikrini, okanye nokulawula isandi okanye ukufaka ingoma yangasemva kuyo ehamba kunye nobuhle bomfanekiso, yeminye yemisebenzi eyenziwayo. ukuhlela ividiyo.
Ukuhlelwa kwevidiyo ngomnye wemisebenzi eyinxalenye yoyilo lwegraphic kuba ibandakanya kwaye iyinxalenye yehlabathi le-audiovisual.
Kule posi, Siza kukubonisa ezona nkqubo zilungileyo zokuhlela iividiyo zakho ngeyona ndlela yobuchwephesha.. Ukongeza, siya kuchaza neminye imisebenzi yayo ephambili.
1 Ukuhlelwa kwevidiyo: yintoni na
2 Iinkqubo ezilungileyo zokuhlela iividiyo
2.4 DaVinci Qoxa 17
2.5 Umlawuli wamandla we-Ultra 20
3 Abanye abaqulunqi bevidiyo bereferensi
3.1 UBarbara Kruger
3.2 Jorge Alderette
3.4 UJavier Jaen
Ukuhlelwa kwevidiyo: yintoni na
Umthombo: Digital Seville
ukuhlela ividiyo, ichazwa njengesenzo sokuqamba kunye nokuhlela uthotho lwekliphu okanye imiboniso apho ividiyo yahlulwe khona, nalapho kudlala khona imiba enjengomfanekiso, umbhalo, isandi, intshukumo, njl.njl.
Yinkqubo apho ingumbuzo wokuqulunqa uluhlu lwezixhobo ezivakalayo ngenjongo yokuzimanya kunye nokuzidibanisa nabanye ukuphumeza umphumo omnye. Ngamafutshane, le nkqubo iyanda kwimfuno kwicandelo loyilo okanye kwihlabathi le-audiovisual.
Umyili wevidiyo okanye umhleli kufuneka akwazi ukwazi ezinye zezona nkqubo zibalaseleyo kwaye azi ukuba zeziphi izixhobo ekufuneka zisetyenziswe nangaliphi na ixesha. Yiyo loo nto, ukuba ngumhleli wevidiyo, akwanelanga nje ukuba nezixhobo ezifanelekileyo ezivakalayo onokuthi uqale ngazo ukusebenza, kodwa kwakhona, Kuyimfuneko ukwazi ukuba umsebenzi othile uza kujongwa njani. Ngesi sizathu, siye sayila uthotho lweempawu ezibandakanya ilizwe lokuhlela ividiyo kwaye eziya kukunceda ufunde ngakumbi malunga nehlabathi le-audiovisual.
umhleli wevidiyo kufuneka wazi izitshixo kunye neenkqubo zokugqiba kakuhle kunye nesiphumo esihle kakhulu. Ngale nto ayithethi ukuba kufuneka ibe ngumhleli ogqibeleleyo, kodwa ukuyenza igqibelele kangangoko. Ukwenza oku, kuya kufuneka wenze imizobo yokuqala yomboniso ngamnye kunye neemontages kwaye ulahle ngokwenkqubo yokhetho.
Ngexesha lendibano, kufuneka wazi ukuba zeziphi na izinto ezihamba kakuhle nenye into elandelayo kwaye ngokuphambanayo. Ngale ndlela, silawula kuphela ukugcina oko kuya kuba yeyona nto ibalulekileyo kuthi.
Umhleli wevidiyo kufuneka azi ukuba angacwangcisa njani kwaye asasaze ixesha labo ngalo lonke ixesha ngomsebenzi wabo. Umzekelo, ukuba unomyalelo ovela kumxhasi othile, akufuneki uthathele ingqalelo kuphela ixesha onikezela ngalo kumsebenzi ngamnye ngosuku, kodwa kufuneka ihambelane nophuhliso lweqhekeza ngalinye eliza kudityaniswa okanye lihlelwe.
Ngamafutshane, ukuze uyiqonde ngcono, umhleli wevidiyo oyingcali akangomnye umyili, kodwa ukwangumsasazi wexesha. Yiyo loo nto kufuneka ubale uhlahlo lwabiwo-mali lwemathiriyeli nganye oyisebenzisayo.
Umthombo: Iziko loNcedo leAdobe
Ngaphandle kwamathandabuzo, isixhobo seenkwenkwezi se-Adobe sasingenakulahleka. I-Adobe Premiere Pro ngumhleli wevidiyo kunye nomqambi, leyo, ukuza kuthi ga ngoku, isetyenziswa kakhulu ngabahleli abachwephesha kunye nabaqulunqi. Abanye abasebenzisi bakwasebenzisa ezinye iinkqubo ezinje ngeAfter Effects, inkqubo ethatha indawo yayo. Zombini iinkqubo ziluncedo ekuhleleni, umahluko ukwinqanaba lobunzima. Ngelixa i-Premiere ifanelekile kwabo baqalayo kwihlabathi lokuhlela, i-After Effects ichasene, yinkqubo yobugcisa kakhulu efuna iiyure ezininzi zokuhlela nokuqonda.
Le nkqubo igqwesileyo iyilwe yinkampani ye-Apple yenye yeendlela ezityebisa abo banyanisekileyo kwi-Apple. Umahluko phakathi kwabanye kukuba le nkqubo isebenza kuphela kunye Mac.Nyinto engalunganga kakhulu ukuba awunayo le nkqubo yokusebenza. Nangona kunjalo, le nkqubo ineenzuzo ezininzi kunye nezinto ezininzi ezinokwenzeka. Umzekelo, inojongano ekulula kakhulu ukuyisebenzisa, nto leyo eyenza ukuhlela kube lula kakhulu.
Umthombo: Ilizwi likaGalicia
Ukuba bekufuneka songeze enye inkqubo, iya kuba yiFilmora ngaphandle kwamathandabuzo. Le nkqubo yenye yezona zisetyenziswa kakhulu ngabasebenzisi. Yenziwa yindlela elula eququzelela ukusetyenziswa kwayo kunye nophuhliso lweeprojekthi zakho. Ukongeza, yenye yeenkqubo ezigqwesileyo, kuba ibiyinxalenye yeeprojekthi ezininzi ezibalulekileyo kwihlabathi le-audiovisual. Kwimeko yokuba asikakuqinisekisi, kufuneka yongezwe ukuba ineephakheji ezininzi zasimahla kunye neefayile zemultimedia, onokufikelela kuzo ngokukhawuleza nangokuchanekileyo. Ngaphandle kwamathandabuzo, yenye yeenkqubo ongenakuphoswa yiyo nantoni na ehlabathini.
DaVinci Qoxa 17
Yenye yezona nkqubo zintle zokuhlela ividiyo kwimarike. Kangangokuba yinkqubo yeenkwenkwezi yabalawuli abaninzi baseHollywood. Ukuba besingekakuqinisekisi, masikuxelele ukuba ikwayenye yeenkqubo eziqulathe imisebenzi emininzi yokusetyenziswa. Ewe kunjalo, inqanaba losetyenziso luluchwephesha ngakumbi kunayo nayiphi na inkqubo esikhe sayikhankanya ngaphambili, ebonisa inqanaba eliphezulu lokuqonda kunye nokuqonda ekuqhutyweni nasekusetyenzisweni kwale nkqubo. Ukuba ujonge enye into yobuchwephesha, oku kunokuba ngaphandle kwamathandabuzo yinkqubo egqwesileyo.
Umlawuli wamandla we-Ultra 20
Yeyona nkqubo igqibeleleyo ukuba uzinikele ekuyileni nasekunyuseni iiprojekthi ezininzi ze-cinematographic. Ineeplagi ezininzi kunye nezixhobo ezinokukunceda kwaye ukothuse ekufezekiseni iiprojekthi zakho. Ukongeza, inojongano olubanzi ngokufanelekileyo apho ungasebenzisa khona ngalinye lamathuba ayo. Ivumela ukuhlelwa kwevidiyo kwii-380 degrees, oku kuthetha ukuba ukwazi ukudlala ngeendlela ezahlukeneyo ngokupheleleyo kuneenkqubo zangaphambili. Ungalibazisi ukuzama esi sixhobo kwaye usibambe, njengoko inokuba sisixhobo obusoloko usikhangela.
Abanye abaqulunqi bevidiyo bereferensi
UBarbara Kruger waziwa njengomnye wabayili baseMelika ababalulekileyo. Iiprojekthi zakhe zisekelwe kwizinto eziqala ukusuka kwiifoto ngokwazo kunye nomxube wee-typographies ezinemifanekiso. Namhlanje waziwa ngeepowusta zakhe ezininzi ezigcwalise iimyuziyam ezahlukeneyo. Ungumyili olungileyo ukuba akhuthazwe nangona engasebenzi kwilizwe le-audiovisual. Ewe, ezinye iifonti zayo kunye nemifanekiso inokukukhuthaza kwizinto eziphambili ozongeza kwiividiyo zakho. Ngaphandle kwamathandabuzo ukhetho olulungileyo.
UJorge Alderrete ngumyili ozalelwe eArgentina. Ubonakala ngokuba ngumyili wepowusta ogqwesileyo. Imiqondiso, masithi ibisoloko iyeyona njongo yakhe iphambili ukuyila. Eyona nto ibonakalisa imisebenzi yakhe kukusetyenziswa kweethoni eziziguqula zibe ziipowusta zekamva. Ube ngumyili weepowusta ezininzi zemidlalo yevidiyo ukusukela oko umgca wegraphic awugcinayo ulungile ukuwubona.. Ngomnye wemithombo yempembelelo enokusetyenziswa ukushiya uphawu kwiiprojekthi zakho. Ukongeza, unokutyebisa umfanekiso weevidiyo zakho ukuze zifane neepowusta zazo.
Ukuba bekufuneka songeze umyili onokuphefumlelwa kuye kwiprojekthi yakho nganye apho ibhalansi kunye nobunzima obubonakalayo bufunekayo, ngokungathandabuzekiyo kuya kuba nguPepe Gimeno. Ungomnye wabayili bemizobo babalaseleyo baseSpain kwimbali yoyilo lwegraphic. Ngokuqhelekileyo uthatha inxaxheba kwiiprojekthi ezininzi, ngakumbi ezo zinesimo senkampani, ngokukodwa ukuyila kweempawu okanye iilogo.
Ngamafutshane, yenye yeenketho apho unokuphefumlelwa xa ubeka into nganye kwiividiyo zakho kunye nokuqinisekisa ukuba wenza iprojekthi enocwangco nelungelelaniswe kakuhle.
Asikwazanga ukuphelisa esi sithuba ngaphandle kokukhankanya lo myili wepowusta omkhulu kunye nomyili wokuhlela. UJavier Jaén ngowokugqwesa omnye wabaqulunqi ababalaseleyo bomhleli okwangoku, kangangokuba uyakwazi ukwenza uyilo olufezekisa umbono olungileyo wokubonwa kwezinto kunye nokulungelelana kakuhle kwento nganye yazo. Ngaphandle kwamathandabuzo, ungumyili odibanisa amava kunye nempembelelo kunye nobuchule. Le yenye yeendlela eziphambili zokukukhuthaza kwiiprojekthi zakho ezilandelayo ngaphandle kwamathandabuzo.
Ukuhlela iividiyo ngumsebenzi ngamnye ekulula ukufikelela kuwo ngenxa yeenkqubo ezilungiselelwe uphuhliso lwazo olupheleleyo. Kuya kongezwa kwakhona ukuba ukuhlelwa kwevidiyo yinto ekhoyo kakhulu kwihlabathi le-cinematographic, kuba ibandakanya i-80% yeprojekthi iyonke. Siyathemba ukuba ezinye iinkqubo esizicetyisileyo zibe luncedo olukhulu kuwe. Ngamnye kubo ukhethwe ngenjongo yokufaneleka kuye nawuphi na umsebenzisi, nokuba yintoni na inqanaba labo. Dare kwaye uqale ukuzama kubo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Iinkqubo ezilungileyo zokuhlela iividiyo